UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare Medicaid | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare Medicaid
Minnesota, waanu daboolnay caymiskaaga
Caymiska wax kharash ah ku bixin ama kharashka jaban ee laga helo UnitedHealthcare Community Plan. Wax ka ogow qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) ee laga heli doono Minnesota.
Dhammaan reer Minnesota waxay mudan yihiin daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adiga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 inaan bixin doono qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) si ay uga caawiyaan reer Minnesota inay caafimaad helaan — oo ay caafimaad-qab sii ahaadaan. Waxaan ku cayminaa dadka waaweyn, dadka naafada ah, haweenka uurka leh iyo carruurta qorsheyaasheena Minnesota Medical Assistance and MinnesotaCare (Medicaid).
Hel qorshe wax badan ku siiya. UnitedHealthcare wuxuu ku leeyahay shabakad weyn oo bixiyeyaal gudaha Minnesota. Taasi waxay ku siinaysaa ikhtiyaaro badan oo aad ku doorato dhakhaatiirta saxda ah iyo khabiirada ku haboon baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Waxaan sidoo kale bixinaa adeegyo badan iyo waxyaabo dheeraad ah, kuwaasoo wax ka beddeli kara noloshaada.
Loogu talagalay caawinta luuqadeed
Si aad u hesho caawin luqadeed ah, fadlan wac 1-888-269-5410 TTY: 711 ama eeg ogeysiiska hoose:
Ogeysiisyada Takoor La'aanta iyo Kaalmada Luuqadeed | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo xareeyo cabashada takoorka eeg ogeysiiska hoose:
Bayaanka Caafimaadka ee Hindida Mareykanka (AI).
Hindida Maraykanku way sii wadi karaan ama bilaabi karaan isticmaalka rugaha caafimaadka ee qabiilka iyo Hindida (IHS). Kaaga ma baahan doono ogolaansho hore ama kuguma soo rogi doono wax shuruud ah si aad adeegyo uga hesho rugahaan. Waayeelka jira 65 sano iyo ka weyn tani waxaa ku jira adeegyada Ka-dhaafitaanka Waayeelka (EW) ee la helo iyadoo loo marayo qabiilka. Haddii dhakhtar ama bixiye kale oo ku sugan rugta caafimaadka ee qabiilka ama IHS uu kuu gudbiyo bixiye ka mid ah shabakadeena, kaagama baahan doono inaad aragto bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga kahor inta aan lagu soo gudbin.
Eeg sababta ay reer Minnesota u doortaan UnitedHealthcare
Noocyo badan oo shabakado dhakhaatiir ah
Booqashooyinka fogaan-aragga caafimaadka oo wax kharash ah lagu bixin
Daawooyinka dhakhtarku qoro oo wax kharash ah lagu bixin ama kharash jaban
Laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 Qorshaha UnitedHealthcare Community wuxuu ku faraxsan yahay inuu ugu adeego aaga metro ee Magaalooyinka Mataanaha ah, 7-degmo ka kooban UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid). Tani waxaa ku jira Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott iyo Washington.
Xulashada qorshaha caafimaadka sannadlaha ah ee MN ee UnitedHealthcare Medical Assistance and MinnesotaCare (Medicaid) waa 10/1/2021 - 12/3/2021
Kala soco wax ku saabsan korona fayraska (COVID-19) ka jira Minnesota, halkan https://www.health.state.mn.us
Nagula soo biir munaasabadaha dib ugu noqoshada dugsiga! Wax yar kadib soo noqo si aad wax badan u ogaato.
Waxaa arrinkaa kujira dadka waaweyn ee aan haysan carruur, dumarka uurka leh iyo carruurta. Context link
Haddii qofkaasi adiga yahay, eeg Qorshaha Bulshada Minnesota ee UnitedHealthcare. Context link
Waxaan haynaa manaafacaad barnaamij iyo waxyaabo dheeraad ah oo isbaddal dhab ah oo wanaagsan ku samayn kara noloshaada. Context link Waxaas oo idil oo qiime jaban ama wax kharash ah aan kuugu kacayn! Context link
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahato cawimaad yaroo dheeraad ah. Context link Ku hel manaafacaad dheeraad ah UnitedHealthcare. Context link
Xubinimada naadiga dhallinyarada oo lacag la’aan ah oo loogu tala galay ka qeyb qaadashada Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha Context link
Booqashooyin internetka ah ayadoo loo marayo waxqabadka la jaatin gareynta Dhaqtarka ee tooska ah ee fiidiyowga. Context link
Hel cawimaad markii la dalbado ah oo loogu tala galay taageerada caafimaadka dhimirka Context link
Waxaanu sidoo kale bixinaa agabyo kugu caawinaya inaad sida ugu wacan uga faaiideysato qorshahaaga. Context link Oo ay kujirto: Context link
Booqo mnsure.org si aad u eegto u qalmitaankaaga. Context link
Waxaan halkan u joognaa adiga, Minnesota. Context link
Si aad wax badan uga ogaato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare, booqo UHCCP dot com/Minnesota Context link
Qorsheyaasha caafimaadka Minnesota ee ugu yaraan dhan $0 kharash ah
Kharashka ku bixin ama kharashka jaban
Dadka waaweyn ee aan carruurta lahayn
Shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo
Eeg Qorsheyaasha Caafimaadka
Barnaamijyada gaarka ah ee Minnesota
Iskaashiga Naadiyada Wiilasha iyo Gabdhaha
Haddii ilmahaagu xubin ka yahay (jira 6-17), waxay xaq u leeyihiin xubinnimada Naadiga Wiilasha & Gabdhaha ee bilaashka ah ee naadiyada kaqaybqaadanaya. Ma qabtaa su'aalo? Ku hako goobtayada Saint Paul.
Laga bilaabo 2022, waxaa diyaar kuu ahaan doona wakiilada UnitedHealthcare Community Plan si ay kaaga caawiyaan ka jawaabista su'aalaha iyo inaad bilowdo.
Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha ee ka jira Minnesota waxay carruurta siiyaan goob ammaan ah oo raaxo leh oo ay ku qaataan waqtigooda firaaqada ah. Naadiyadu way furan yihiin marka aysan dugsiyadu jirin, waxayna bixiyaan jawi wanaagsan oo lagu dhiso xiriirada, lagu horumariyo dabeecadda oo lagu qaato madadaalada. Xubinimada waxaa ku jira barnaamijyada dugsiga kadib, la-talinta iyo gacan ka siinta shaqada guriga.
UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) Plans 101: Waxa la dabooli doono
Qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) waxay dabooli doonaan:
Daryeelka dadka caafimaadka qaba iyo dadka jirran
Daryeelka loogu talagalay xaaladaha muddada-dheer
Daryeelka ilkaha, aragga iyo maqalka
Daryeelka guriga iyo saadka
Gaadiid-raaca iyo adeegyada kale
Way kala duwanaan karaan nooca qorshaha iyo u-qalmida ee macaashyada. To learn more, visit mnsure.org
Warar iyo taariikho muhim ah:
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota ayaa la heli doonaa billaha soo socda. Fadlan si joogto ah dib ugu eeg si aad u ogaato wixii soo kordha iyo wararka. Xusuusinta taariikhaha muhiimka ah ee soo socda:
Muddada Xulashada Qorshaha Caafimaadka Sannadlaha ah: 10/1/21-12/3/21
2022 Is-diiwaangelinta - Macaashyadaada caymis waxay bilaaban doonaan markay tahay: 1/1/22
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.27.2022 waqtiga 12:07 GALABNIMO CDT